Kelly Smith: Xiddigtii Haysatay Rikoodhka Gool Dhalinta Xulka England Oo Ciyaaraha Ka Fadhiisatay
HomeWararka MaantaKelly Smith: Xiddigtii Haysatay Rikoodhka Gool Dhalinta Xulka England Oo Ciyaaraha Ka Fadhiisatay
Xiddigadii haysatay rikoodhka gool dhalinta xulka England, naadiga Arsenal na weerarka uga ciyaari jirtay ee Kelly Smith ayaa kubadda cagta macasalaamaysay oo kaga fadhiisatay iyadoo 38 jir ah.
Smith, oo u dhalisay 46 gool xulka qarankeeda, waxay noqotay haweenaydii ugu horeysay ee Ingiriis ah ee kubadda cagta ciyaarteeda ku xamaalata, markii ay ku biirtay naadiga reer Maraykan ee New Jersey sanadii 1999 kii.
Weeraryahanadani, waxay ku guuleysatay inay 117 ciyaarood u safato qarankeeda England, iyadoo ka qayb gashay lix tartar oo waaweyn oo kala duwan, kana mid noqotay xulkii Great Britain ee ka qayb galay ciyaarihii Olambiga London ee 2012 kii.
Smith waxay ku guuleysatay shan jeer koobka FA Cups iyadoo u ciyaaraysay kooxda dumarka Arsenal, kulamadii gunaanadka ee shantaas koobna, waxay dhalisay lix gool.
“Waxaan dareemayaa in wakhtigii aan ku fikiri jiray la soo gaadhay,” ayay ku tidhi warfidiyaha BBC Sport. “Waxay ila tahay inaan wakhti aad u fiican soo qaatay intii aan ciyaaraha ku soo jiray, qarankayga iyo heer naadiyada labadaba, Adduunka Ayaan ku soo wareegay, maadaama aan 38 jir ahayna, jidhkayga ayaa ii sheegaya in loo baahan yahay inaan joojiyo.
“Wax aan qoomameynayo oo I seegay ma jiraan, Ilbidhiqsi kasta oo kamid ahaa mustaqbalkaygii ciyaaruhu wuxuu ahaa mid aan jeclaa oo xiise lahaa. Mar kasta oo aan gashado funaanada xulka England –na waxaan dareemi jiray shucuur saa’id ah oo inaan wadankaygii metelayo ah.
“Imika ciyaaruhu waxay marayaan marxalad xaas-aasi ah, waanay fiican tahay inaad cagaha kala baxdo wakhtigii ugu haboonaa.”